Football Khabar » आज युभेन्टस र बार्सिलोनाको ‘महाभिडन्त’ हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
आज युभेन्टस र बार्सिलोनाको ‘महाभिडन्त’ हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज एकैदिन विभिन्न ८ खेल हुँदैछन् । आज हुने खेलहरूको धेरैको ध्यान इटालियन क्लब युभेन्टस र स्पेनिस क्ल बार्सिलोनाबीचको खेलमाथि हुनेछ । यो खेल युभेन्टसको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति ठीक १ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
युभेन्टस र बार्सिलोना दुवैले समूह चरणमा दोस्रो खेल खेल्न लागेका हुन् । यसअघि दुवै टोलीले आ–आफ्नो खेल जितेका छन् । समूह ‘जी’मा बार्सिलोना गोलअन्तरमा अघि रहेर शीर्ष स्थानमा छ भने युभेन्टस दोस्रो स्थानमा छ ।
टुरिन सहरस्थित युभेन्टस रंगशालामा युरोपका दुई हेबिवेट टोली भिड्दा उनीहरू लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन् । यसअघि पहिलो खेलमा युभेन्टसले डाइनाभो किभलाई ०–२ ले हराएको थियो भने बार्सिलोनाले हंगेरीको क्लब फेरेन्सभारोसलाई ५–१ ले हराएको थियो ।
युभेन्टस र बार्सिलोना भिड्दा बार्सिलोनाका प्रमुख खेलाडी मेस्सी टोलीमा उपलब्ध हुनेछन् । उनी आफ्ना खास प्रतिस्पर्धी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टोलीविरुद्ध सुरुआतबाटै उत्रिनेछन् । तर, आज रोनाल्डोले बार्सिलोनाविरुद्ध नखेल्ने करिब–करिब पक्का छ । यो समाचार बनाउँदासम्म युभेन्टसले आफ्नो प्रारम्भिक टोली समेत सार्वजनिक गरेको छैन । इटालियन मिडियाले युभेन्टस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित आफ्ना खेलाडी रोनाल्डोको कोरोना जाँचको रिपोर्टलाई अन्तिम समयसम्म पर्खिएर मात्रै टोली घोषणा गर्ने तयारीमा छ ।
खेलको १२ घन्टाअघिसम्म रोनाल्डोको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खण्डमा युभेन्टसले रोनाल्डोलाई टोलीमा समावेश गरेर खेलाउन चाहेको छ । तर, खेल आउन १२ घन्टाभन्दा कम समय रहँदासम्म युभेन्टसले आफ्नो टोली घोषणा नगरेकाले बार्सिलोनाविरुद्ध रोनाल्डो नखेल्ने करिब–करिब पक्का देखिएको हो ।
युभेन्टस र बार्सिलोनाको खेललाई रोनाल्डो र मेस्सीबीचको प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेरिएको थियो । यी दुई खेलाडीले सन् २०१८ यता एकअर्काविरुद्ध खेलेका छैनन्, जतिबेला रोनाल्डो रियल मड्रिडमै थिए । आपसमा खास प्रतिस्पर्धी लामो समयपछि खेल्ने भएपछि यो खेल धेरैका लागि व्यग्र प्रतीक्षाको खेल बनेको थियो । तर, रोनाल्डो कोरोनाबाट संक्रमित बनेपछि उनले पहिलो लेगको खेल गुमाउने भएका हुन् ।
दुई साताअघि नै कोरोनाबाट संक्रमित बनेका रोनाल्डोले आइसोलेसन बसाइ पूरा गरिसकेका छन् । तर, तीनपटकको जाँचमा पनि उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनले सिजनकै एक महत्त्वपूर्ण खेल गुमाउने भएका हुन् । उनले यसअघि घरेलु लिगमा दुई खेल गुमाइसकेका छन् ।
युभेन्टस र बार्सिलोना यस प्रतियोगितामा पछिल्लोपटक सन् २०१७ मा क्वार्टरफाइनलमा भिडेका थिए । जहाँ युभेन्टसले पहिलो लेगमा आफ्नो घरेलु मैदानमा बार्सिलोनालाई ३–० को नमिठो हार चखाएको थियो भने बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा भएको दोस्रो लेग ०–० मा सकिएको थियो । त्यसबेला युभेन्टसले बार्सिलोनालाई समग्रमा ३–०ले हराएर प्रतियोगिताबाट आउट गराएको थियो । त्यसपछि यी दुई टोली पुनः च्याम्पियन्स लिगमा आमनेसामने हुन लागेका हुन् ।
प्रकाशित मिति १२ कार्तिक २०७७, बुधबार १४:१३